Gudoomiyaha golaha wakiillada Puntland oo sheegay in ay wada-shaqayn dhow la yeelan doonaan golaha shacabka JFS – Kalfadhi
Gudoomiyaha golaha wakillada Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo-daareed oo safar ku jooga magaalada Muqdisho ayaa la kulmay gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka ahna sii hayaha xilka gudoomiyaha golaha shacabka ee dowladda federaalka ah Mahad Cabdalla Cawad.
Gudoomiye Dhoobo-daareed oo xalay ka warbixiyay kulankaas wuxuu sheegay in ay booqasho ku taageen xafiisyada muhiimka ah ee golaha shacabka, dhismaha cusub ee golaha loo dhisayo iyo xaruumihii hore ee taariikhda ku lahaa baarlamanka dalka.
Labada masuul ayaa ka wada-hadalay in xiriir wanaagsan ay yeeshaan baarlamanka dowladda Puntland iyo kan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Gudoomiye Dhoobo-daareed ayaa muuqaal ka soo baxay xafiiskiisa wuxuu ku sheegay in ay doonayaan in guddiga cusub ee joogtada ah ee golaha wakiillada Puntland iyo kuwa federaalku in ay is arkaan wada-shaqaynna dhowna yeeshaan.
Gudoomiyaha iyo wefdiga la socda oo ay ku jiraan xildhibaano heer federaal ah oo laga soo doorto Puntland iyo gudoomiye ku xigeenka labaad ee golihiiisa ayaa teer iyo horaantii bisha waxay booqo ku joogeen dalka Djibuuti.
Sida ay ku waramayaan wakiillada Kalfadhi ee Muqdisho, ujeedada socdaalka Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland ayaa lagu sheegay ka qayb galka Munaasabadda furitaanka Kalfadhiga 5aad ee Golaha Shacabka oo dhowaan furmi doona.
Xildhibaan Jeesoow “Reysal Wasaaraha waxa uu booqday dad gumeysi ku jiro”
Xildhibaan Jeesoow "Reysal Wasaaraha waxa uu booqday dad gumeysi ku jiro"